नेकपा रोल्पा इन्चार्जसहित ३ नेता पक्राउ
रोल्पा अनलाइन Thursday, May 16, 2019
रोल्पा, जेठ २ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा रोल्पाका इन्चार्ज जयप्रकाश रोका ‘प्रताप’ लुंग्री गाउँपालिकाका इन्चार्ज धनबहादुर खत्री ‘टाइगर’ र सोही गाउँपालिकाकै सेक्रेटरी भुपेन्द्र खड्कालाई लुंग्री गाउँपालिका–१ ऐपेबाट आज आज पक्राउ गरेको छ । कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रम गर्दैगर्दा सुराकीको आधारमा....
दोश्रो मेयर कपको तयारी
रोल्पा । रोल्पा नगरपालिकाले दोश्रो मेयरकपको लागि बृहत तयारी थालेको छ । नगर उपप्रमुख मनकुमारी घर्तीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विभिन्न तयारी उपसमितिहरु गठन गरेको छ । नवराज आचार्यको संयोजकत्वमा सुरक्षा व्यवस्थापन उपसमिति गठन गरेको छ । उपसमितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका प्रतिनिधि, यामबहादुर गुरुङ सदस्य रहेका....
स्मार्ट कृषि गाउँ घाडागाउँमा मसला बाली लगाइदैं
रोल्पा अनलाइन Wednesday, May 15, 2019
रोल्पा । प्रदेश नम्बर ५ सरकारले कृषिमा प्रविधिको प्रयोग बढाउदै यान्त्रीकीकरण गर्ने उद्देश्यले सुरु गरेको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम अन्तरगत रोल्पाको घोडागाउँमा मसला बाली लगाउन सुरु गरिएको छ । जिल्लामा मसला बालीको विस्तार गर्न अदुवा र बेसारको व्यावसायिक खेती सुरु गरिएको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम....
युद्ध पर्यटकीय क्षेत्र बनाइदैं
रोल्पा अनलाइन Monday, May 13, 2019
रोल्पा । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा गुरिल्ला तालिम केन्द्रको रुपमा प्रयोग भएका रोल्पाका विभिन्न स्थानलाई युद्ध पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने भएको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० लाई सफल बनाउन पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा रोल्पा नगरपालिकाले वडा नं. १० को घामतारा, भनभने र वडा नं. ६....
बृद्धबृद्धालाई तिर्थ यात्रा गराउदैं वडाध्यक्ष
रोल्पा । रोल्पाको गंगादेब गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष जलेश कुमार केसीले वडाभित्रका बृद्धबृद्धालाई तिर्थ यात्रा गराउनुभएको छ । ७५ बर्ष पुगेका ३८ जना बृद्धबृद्धालाई स्याहार गर्ने परिवारका सदस्य सहित देवघाट, लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी घुमाइएको हो । यस्तै उहाँहरुलाई भैरहवाको अष्ट्रिज फर्म हेर्न चाहेकाले उक्त फर्मको समेत अवलोकन....
कमजोर स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रम
रोल्पा अनलाइन Sunday, May 12, 2019
रोल्पा । प्रदेश नम्बर ५ सरकारले मानवविकास सुचाङ्कमा अति कमजोर रहेका स्थानीय तहमा मूख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । मानवविकास सुचाङ्कमा अति कमजोर रहेका प्रदेश नं. ५ का १२ वटै जिल्लाका ३५ वटा गाउँपालिकाहरुमा यो कार्यक्रम लागु गरिएको हो । जसअनुसार रोल्पा जिल्लाका....
विश्वकर्मामाथि ढुङ्गा प्रहार गर्ने सहमतिमा छुटे
रोल्पा । नेपाल पत्रकार महासंघ रोल्पाका निवर्तमान अध्यक्ष एवं संयुक्त दलित जनअधिकार मञ्च रोल्पाका सचिव मानसिंह विश्वकर्मामाथि ढुङ्गा प्रहार गर्ने माडी गाउँपालिका वडा नं. ४ का निमबहादुर परियारलाई आगामी दिनमा गल्ती नगर्ने सहमतिमा शनिवार छोडिएको छ । बैशाख २६ गतेको घटनाप्रति संयुक्त दलित जनअधिकार मञ्च....
विद्युत विस्तारले रोल्पाका गाउँ झलमल्ल
रोल्पा अनलाइन Tuesday, May 7, 2019
रोल्पा । यसअघि प्यूठानको झिमरुक जलविद्युतबाट उत्पादित विद्युतबाट रोल्पाका केही पूर्वीभागमा मात्र विद्युत सेवा पुगेको थियो । तर अहिले स्थानीय तहले विद्युत विस्तारका लागि बजेट छुट्याएपछि जिल्लाभरनै केन्द्रीय प्रशारण लाइनको विद्युत विस्तार भएको छ । रोल्पाका गाउँ गाउँमा विद्युत विस्तार भएपछि गाउँ उज्यालो मात्र भएका....
रोल्पा अनलाइन Monday, May 6, 2019
रोल्पा । रोल्पा नगरपालिकाको कार्यालयले नयाँ कर्मचारीहरुलाई स्वागत एवम पुराना कर्मचारीहरुलाई बिदाई कार्यक्रम गरेको छ । नगरपालिकाको आफनै हलमा आयोजित कार्यक्रममा पुराना ५ जना कर्मचारीहरुलाई समायोजनमा गएपछि बिदाई गरेको हो भने नयाँ ४ जना कर्मचारीहरुलाई स्वागत गरेको छ । विभिन्न स्थानमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरु....
आधुनिक कृषि औजार उद्योगको उद्घाटन
रोल्पा । रोल्पा नगरपालिका–७ नं. वडामा रहेको पवित्र कृषि औजार निर्माण उद्योगको एक कार्यक्रमका बिच उदघाटन गरिएको छ । रोल्पा नगरपालिका वडा नं ७ को वडा कार्यालयबाट रु २ लाखको अनुदानमा निर्मित आधुनिक कृषि औजार निमार्ण भटटीको नगर प्रमुख पूर्ण के.सी.ले उद्घाटन गर्नुभयो । अब नयाँ....
रोल्पामा खुल्यो एनआईसी एसिया बैंक